‘हिन्दी सिरियल हेर्दिनँ’::Nepali News Portal from Nepal
‘हिन्दी सिरियल हेर्दिनँ’
पोखरा, २५ फागुन – मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल– २०१६ मा मोस्ट ब्युटिफुलको उपाधि जितेपछि प्रीति कार्की ब्युटी प्रेजेन्टको क्षेत्र निरन्तर सक्रिय छिन्। उनी हाल ‘ग्याल्म वल्र्ड प्रालि’ नामक इभेन्ट कम्पनीको सीईओका रूपमा कार्यरत छिन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक कार्की लेखनमा रुचि राख्छिन्। उनी शाकाहारी अभियन्ता पनि हुन्। पेसागत रूपमा आफ्नै ल फर्ममा व्यस्त उनी आफ्नो कम्पनीबाट ‘मिसेस नेपाल ग्याल्म वल्र्ड’ प्रतियोगिता गर्दै छिन्। यसबाहेक उनी विभिन्न इभेन्टको तालिम र कार्यक्रममा व्यस्त छिन्।
विवाहपछि प्रायजसो महिला ग्ल्यामरको क्षेत्रबाट हराउँछन् तर उनी भने सक्रिय रूपमा यही क्षेत्रमा छिन्। कसरी त ? भन्छिन्, ‘विगत चार वर्षदेखि ब्युटी प्रेजेन्टको क्षेत्रमा छु। विवाह र बच्चा भएपछि पूर्ण रूपमा गृहिणीमा सीमित थिएँ तर मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल– २०१६ मा मोस्ट ब्युटिफुलको उपाधि जितेपछि यो क्षेत्रप्रति झुकाव बढेको हो। यसपछि मोडलिङ र विभिन्न इभेन्टको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै यो क्षेत्रमा रमाउन थालेँ।’
नेपाली महिलाका लागि सौन्दर्य प्रतियोगिता कत्तिको आवश्यक छ त ? भन्छिन्,‘मोडलिङमा आउनेहरूका लागि यस्ता ब्युटी इभेन्ट प्रथम खुड्किलो हो। विशेषगरी युवायुवतीका लागि उचित अवसर पनि हुन सक्छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्रै नभई आफूभित्र लुकेको प्रतिभा देखाउने अवसर मिल्ने हुँदा व्यक्तित्व विकास हुन्छ।’
‘कुनै पनि पेसा आफैंमा राम्रो या नराम्रो हँुदैन। विकृति डाक्टर, वकिल या जुनसुकै पेसामा पनि छ, फरक यति हो यो क्षेत्र हरबखत मिडियाको नजरमा रहन्छ। कमी कमजोरी यो क्षेत्रमा पनि छ। कतिपय इभेन्ट पैसामुखी मात्रै भइदिँदा विकृति फैलिएको छ। प्रतियोगी आफंै पनि जागरुक हुन जरुरी छ’, उनको सुझब छ।
राम्रो मान्छेको बुद्धि हुँदैन या महिलाको बुद्धि घँुडामा हुन्छ जस्ता उखानले नेपाली समाजमा महिलाले जे काम गरे पनि दोस्रो दर्जाका रूपमा हेरिएको उनको बुझाइ छ। ‘बैद्धिकता या सौन्दर्यताभन्दा पनि आफूसित जे छ त्यही क्षेत्रमा निखार ल्याउनुपर्छ’, उनी भन्छिन्। समय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त ? ‘म हिन्दी सिरियल हेर्दिनँ त्यसैले धेरै समय पाउँछु। महिलाको विवाहपछि करियर सकिने नभएर झन् परिपक्व तरिकाले सुरु हुन्छ। हाम्रो घरसँगै समाजसँग कर्तव्य रहन्छ। एउटा आदर्श नारीको परिभाषा घर, परिवार सम्हाल्नु मात्रै होइन। हाम्रो सामाजिक संरचना बदल्नु आवश्यक छ।’ ‘मानव जातिको नारी त्यो रूप हो जसलाई प्रकृतिले शारीरिक सुन्दरतासँगै दया, प्रेम, करुणाको मूर्ति बनाएकी छन्। यो हाम्रो कमजोरी नभएर शक्ति हो। हामी पुरुषजस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामीमा जे प्रतिभा छ त्यसलाई लुकाएर राख्नु भएन’, नारीमाथि उनको व्याख्या छ।